Saxaafadda Madaxa bannaan oo loo diiday teendhada afisyooni | KEYDMEDIA ENGLISH
Saxaafadda Madaxa bannaan oo loo diiday teendhada afisyooni
Soomaaliya waxay kamid tahay meelaha ugu khatarta badan ee lagu dhibaateeyo wariyeyaasha, is hor istaagna lagu sameeyo shaqadooda iyadoo loo sababeeyo isla-xisaabtan la'aanta iyo colaadaha mudada dheer ka jira wadanka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Qaar ka mid Saxaafadda Madaxa bannaan ee ka howl-gasha gudaha dalka iyo wakiil wareedyo warbaahinno caalami ah ayaa loo diiday in ay gudaha u galaaan hoolka doorashada Madaxweynaha oo ay ka socoto hadal jeedinta musharrixiinta.
Sida ay sheegeen wariyayaal saaka xilli hore tagay albaabka laga galo teendhada Afisyooni, waxaa loo diiday in ay gudaha u galaan sababo aan la caddeyn, waxaana kaliya la fasaxay warbaahinta Qaranka iyo wakiil wareedyo u shaqeeya warbaahi dibadda ah.
Wariyayaashu, waxa ay sheegeen in guddiga doorashada ay ku wargaliyeen in ay shaashadaha ka daawadaan doorasha, waxayna tallaabadaas ku tilmaameen mid meel looga dhacayo waajibaadka saxaafadda laguna tumanayo xuquuqdooda.
Keydmedia Online oo xiriir hoose la sameysay xubin ka mid ah habdhowra-yaasha Golaha shacabka, ayaa ogaatay in sababta bannaanka loogu hayo saxaafadda ay tahay in Xildhibaannada aysan wali soo wada xaroon, xilli qaar ka mid ah musharrixiinta qudbadahooda jeediyeen.